ရှူး... တိုးတိုး !! ဒီမှာ မင်းဆံနွယ်တွေ သိပ်လှသွားစေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက် !! | Home
Home› Update› ရှူး... တိုးတိုး !! ဒီမှာ မင်းဆံနွယ်တွေ သိပ်လှသွားစေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက် !!› ရှူး... တိုးတိုး !! ဒီမှာ မင်းဆံနွယ်တွေ သိပ်လှသွားစေမယ့် လျှို့ဝှက်ချက် !!
ရူပါလေးထင်းလင်းလှပနေဖို့ ဆံကေသာရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ထက်ဝက် အရေးပါနေတယ်ဆိုတာဟာ ဒီနေ့ခေတ်အတွက် လျှို့ဝှက်ချက် မဟုတ်တော့ပေမဲ့ ဒီသော့ချက်ကို ထိထိမိမိ ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးသော နည်းလမ်းတွေကတော့ လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်နေနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒီလို လှပခြင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့များ ဖွင့်လှစ်နိုင်မလဲ…။
ရှေးယခင် အဆက်ဆက်ကတည်းက ဆံကေသာ ပိုမိုလှပကောင်းမွန်စေဖို့ရာ ထိန်းသိမ်းပြုပြင်နည်းများစွာရှိတဲ့အနက် ယနေ့နောက်ဆုံးပေါ် ခေတ်စားလာတဲ့ နည်းလမ်းကတော့ Hair Spa ပြုလုပ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Hair Spa ပြုလုပ်ခြင်းဟာ ဆံကေသာကို ပြန်လည်သန်စွမ်းလာစေနိုင်တဲ့ ကုထုံးဖြစ်သလို အမျိုးသား အမျိုးသမီး အများစု ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ဗောက်ထခြင်း၊ ဆံသားကြမ်းတမ်းခြင်းများနဲ့ မွဲခြောက်ခြင်းအစရှိတဲ့ ပြဿနာတွေကို လျော့ပါးသက်သာစေနိုင်ပြီး ဦးရေပြား သွေးလှည့်ပတ်မှုကိုလည်း ကောင်းမွန်စေတဲ့ အကျိုး ကျေးဇူးတွေ ရှိပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် အမြဲတမ်းလှပနေမှ သဘောကျတဲ့ ကိုကို မမတို့အတွက် တစ်စ တစ်စနဲ့ ပိုမိုလှပလာစေမယ့် အိုးမကွာ အိမ်မကွာ Hair Spa နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ရှိတဲ့အထဲက စာရေးသူနှစ်သက်မိတဲ့ နည်းလမ်းတချို့ကို ပြန်လည်ဖောက်သည်ချပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဆံသားနဲ့ ဦးရေပြားအတွက် လိုအပ်ချက်
သဘာဝ သံလွင်ဆီစစ်စစ်ဟာ ဆံပင်နဲ့ဦးရေရဲ့လိုအပ်ချက်အတွက် အကောင်းဆုံးသော အဖြေဖြစ်တဲ့အတွက် သံလွင်ဆီစစ်စစ်ရဖို့တော့ လိုပါတယ်။ သံလွင်ဆီကို ဆံပင်နဲ့ ဦးရေပြားနှံ့အောင်ထည့်ပြီး ၁၅ မိနစ်ခန့် ဖြည်းဖြည်းချင်း နှိပ် နယ်ပေးပါ။ ခေါင်းပေါင်းဖို့အတွက် တဘက်ပါးတစ်ထည်ကို ရေနွေးစိမ် ရေပြန်ညှစ်ပြီး ၁၀ မိနစ်ခန့် ပေါင်းထားပေးပါ။ ပေါင်းတင်ချိန်ပြည့်လို့ ရှန်ပူနဲ့ လျှော်ပြီး ရေစင်အောင် ပြန်ဆေးချပေးလိုက်တဲ့ အခါ ပျော့ဆေးသုံးစရာမလိုအောင် ပျောင်းအိနေတဲ့ ဆံသားတွေကို ရရှိနိုင်မှာပါ။
နောက်တစ်နည်းကတော့ အုန်းဆီပါ။ ဆံပင်နဲ့ပတ်သတ်ရင် အရင်းနှီးဆုံးသိပြီးသားမို့ အထူးတလည် ညွှန်းစရာမလိုတော့ပါဘူးနော်။ အသုံးပြုနည်းကတော့ အုန်းဆီကို ဦးရေနဲ့ဆံပင်အနှံ့သုတ်လိမ်းပြီး ၅ မိနစ်လောက် ညင်သာစွာ နှိပ်နယ်ပေးရပါမယ်။ ပြီးရင် ခေါင်းပေါင်းဖို့အတွက် တဘက်ပါးတစ်ထည်ကို ရေနွေးစိမ် ရေပြန်ညှစ်ပြီး တစ်နာရီခန့် ပေါင်းထားပေးရပါမယ်။ ခေါင်းလျှော်ပြီးတဲ့အခါ Dryer နဲ့အခြောက်ခံခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။
ထောပတ်သီးဟာ ဆံသားကို တောက်ပကျန်းမာတဲ့ အသွင်အပြင်ဖြစ်စေပြီး ဆံသားပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ထောပတ်သီးနဲ့ ပေါင်းတင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ထောပတ်သီး ကိုတော့ ကိုယ့်ဆံပင်ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး သုံးရပါမယ်။ ထောပတ်သီး ခပ်ကြီးကြီးနှစ်လုံးကို အသားထုတ်ယူမယ်ဆို ပျားရည်စစ်စစ် ဟင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်းစာနဲ့ ရောပြီး အနှစ်ဖြစ်လာတဲ့အထိ ကြေအောင်မွှေရပါမယ်။ ဆံပင်ကို သေချာဖြီးသင်ရှင်းလင်းပြီးမှ ထောပတ်သီးအနှစ်တွေကို ဦးရေကနေ ဆံဖျားအထိ သုတ်လိမ်းပေးရပါမယ်။ မိနစ် ၂၀ လောက်ထားပြီးရင်တော့ ခေါင်းလျှော်လို့ရပါပြီ။
ဆံပင်အဖျားတွေ နီရဲကွဲထွက်နေရင်တော့ ငှက်ပျောသီးမှည့်နဲ့ ပေါင်းတင်နိုင်ပါတယ်။ သဘာဝအဆီ၊ ဗီတာမင်နဲ့ ပိုတက်ဆီယမ်ကြွယ်ဝတဲ့ ငှက်ပျောသီးဟာ ဆံသားပျော့ပျောင်းစေဖို့ ကူညီနိုင်ပြီး ဆံပင်တွေ အဖျားကွဲထွက်ပျက်စီးခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးမှည့် တစ်လုံး၊ သံလွင်ဆီ ဟင်းစားဇွန်း သုံးဇွန်းခန့်နဲ့ ကြက်ဥ(အကာသုံး)တစ်လုံးကို နှံ့အောင်ရောသမ မွှေပြီး (Blender သုံးရင်ပိုကောင်းပါတယ်) ဆံသားတွေပေါ်ကို သုတ်လိမ်းပေးပါ။ မိနစ် ၂၀ လောက်ထားပြီး ခေါင်းလျှော်နိုင်ပါပြီ။
ငြိလွယ် ရှုပ်လွယ် ရှင်းစေမယ်
ရှုပ်ထွေးလွယ် ငြိလွယ်တဲ့ဆံပင်တွေအတွက် Apple Cider Vinegar ကို အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေး ရှိနေပါတယ်။ စူပါမားကတ်တွေမှာ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့ Apple Cider Vinegar ကို ရေနဲ့ဆတူ ရောစပ်မွှေပြီး ရေဖြန်းတဲ့ ဘူးလေးထဲထည့်ပါ။ ပြီးရင် ဆံပင်အနှံ့သေချာဖြန်းပေးပြီး ၅ မိနစ်ကြာထားပြီးတဲ့အခါ ရှန်ပူ၊ ပျော့ဆေးသုံးပြီး ခေါင်းလျှော်လိုက်ရုံပါပဲ။
ဆံသားခြောက်သွေ့မှုအတွက် ဘီယာက ကူညီနိုင်ပါတယ်။ ဘီယာမှပါဝင်တဲ့ ပရိုတိန်းက ဆံပင်တွေကို အစိုဓာတ်ပေးပြီး အရောင်ထွက် တောက်ပစေသလို အရှည်လည်းမြန်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အထူးသတိပြုရမှာကတော့ ဒီနည်းကို
တစ်ပတ်မှာ တစ်ကြိမ်သာ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ ပြုလုပ်နည်းကတော့ အထက်ကအတိုင်း ဆံပင်အနှံ့ ဘီယာသုတ်လိမ်း၊ ဦးရေကို ညင်သာစွာ နှိပ်နယ်ပေးပြီး ခေါင်းလျှော်လိုက်ရင်ရပါပြီ။
ဒီနေ့လျှော်၊ မနက်ဖြန် အဆီတွေထွက်၊ ဆံပင်တွေပြန်ကပ်နဲ့ ဖြစ်တတ်တဲ့ Oily Hair အမျိုးအစားကလည်း တစ်မျိုးစိတ်ညစ်စရာပါပဲ။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းနည်းကတော့ ရှားစောင်းလက်ပတ်အနှစ်ကို ထုတ်ယူ၊ ရှောက်ရည်တစ်စက် နှစ်စက်နဲ့ သမအောင်ရောမွှေပြီး ဆံသားနဲ့ ဦးရေအနှံ့သုတ်လိမ်းပေးရမှာပါ။ ၁၅ မိနစ်လောက်ထားပြီးရင်တော့ ခေါင်းလျှော်လို့ရပါပြီ။
ဆံကေသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတွေ ကင်းဝေးပြီး ကောင်းခြင်းတစ်ဖြာကို တောက်ပစွာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက်…။